समुद्र किनार अनौठो चीज भेटेपछि आमाछोरीले घरमा ल्याए, झण्डै गएन ज्यान ! -
समुद्र किनार अनौठो चीज भेटेपछि आमाछोरीले घरमा ल्याए, झण्डै गएन ज्यान !
VoiceNp	प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७ समय: १८:४२:४५
बेलायतको केन्टमा बस्ने आमाछोरीले समुद्र किनार घुम्ने क्रममा अनौठो बस्तु भेटेपछि घरमा लिएर आए । उनीहरुले यसलाई भान्छामा राखेका थिए । भान्छामा त्यो वस्तु विष्फोट भयो । आमाछोरी भने भाग्यले बचे । खासमा उनीहरुले त्याएको त्यो वस्तु दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिएको नपड्किएको ग्रेनेड थियो । ३८ वर्षकी जोडी क्रुज र उनकी छोरी ८ वर्षकी इसाबेलाले समुद्र किनारमा घुम्ने क्रममा यो वस्तु भेटेका थिए ।
जोडी र इसाबेलालाई सुरुमा यो कुनै प्राचीन जीवको अवशेष हो जस्तो लागेको थियो । उनीहरुले यो कुनै जनावरको हड्डी हुन सक्ने पनि सोचेका थिए तर उनहिरुलाई यो ८० वर्ष पुरानो ग्रेनेड होला भन्ने रत्तिभर पनि अनुमान थिएन । जोडीले डेलीमेलसँगको कुराकानीमा आफूले यो वस्तु के हो भन्ने थाहा होस् भनेर यसको फोटो पुरातत्व विभागको वेबसाइट र सामाजिक संजालमा पनि पोस्ट गरेको बताइन् । धेरैको प्रतिक्रिया पनि आएको थियो तर कसैले पनि यो ग्रेनेड हुन सक्ने बताएनन् ।
जोडीका अनुसार त्यो हड्डीजस्तो थियो र धेरै तौल पनि थिएन । कतैबाट पनि त्यो धातुजस्तो देखिएको थिएन । एक महिलाले यो ह्वेलको बान्ता हुन सक्ने बताउँदै हो कि होइन भन्ने तातो पिनले घोचेपछि थाहा हुने बताएपछि जोडीले त्यसलाई तातो पिनले घोचिन् । तर, यसो गर्नासाथ त्यो वस्तु आगोको गोलामा परिणत भयो । उनले भनिन् ‘मेरी छोरी चिच्याउँदै भागिन् । मैले त्यसलाई समातेर दौडिँदै गएर किचनमा फ्याँकिदिएँ जहाँ त्यो विष्फोट भयो ।’